I-TCC Africa kanye ne-Eider Africa Basebenzisana Nabacwaningi Ekufundiseni Abasaqala Umsebenzi abavela eSub Sahara Africa - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJohanssen Obanda on I-6th Meyi 2021 I-6th Meyi 2021
Uma ungumcwaningi, mhlawumbe ujwayelene nomjikelezo wempilo yocwaningo nazo zonke izinselelo namathuba ahambisana nakho. Kuyizindaba ezinhle uma ungumcwaningi ovela eSub-Saharan Africa ngoba abalingani bethu, i-TCC Africa kanye ne-Eider Africa bamemezele ukusebenzisana kwabo ukunikela ngolwazi kuleyo ndaba.
I-TCC Africa futhi Eider Africa sebengenele ubambiswano olusemthethweni lokuxhasa abacwaningi bemisebenzi yokuqala ngosizo lokuqeqeshwa kuhambo lwabo lokucwaninga. Enye yezinselelo ezinkulu abaxhasi abazifunela imisebenzi yokuqala ababhekene nayo ukuqonda impilo yabo kusuka esiphakamisweni socwaningo kuya ekushicileleni. Ukuntuleka kokusekelwa okulinganiselwe kule nqubo, kunomthelela emazingeni okuphuma kwabafundi ezifundweni ze-postgraduate. Unalokhu engqondweni, zombili i-TCC Africa ne-Eider Africa zizogcwalisa igebe ngokunikeza ukwesekwa kontanga nabacwaningi bemisebenzi yokuqala.
I-TCCAfrica izobe ihlinzeka ngoqeqesho e ukuxhumana kwezesayensi nokushicilela izifundo, ngenkathi i-Eider Africa izohlinzeka ukuqeqeshwa nokusekelwa mayelana nempilo yocwaningo yawo womabili amalungu omphakathi. Abaphenyi bokuqala bezemisebenzi bazodinga ukubhalisela i-TCC Africa Courses ukuze bathole ukwesekwa kokuqeqeshwa.
Kuze kube manje, okungenani abacwaningi abangama-900 abavela eSub Sahara bazothola ukuqeqeshwa kontanga ngalokhu kubambisana.
Eider Africa yinhlangano eqhuba ucwaningo, ididiyela, futhi isebenzise ngokubambisana, ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi, kanye nezinhlelo zokufundisa ngocwaningo ezenziwa online zabafundi base-Afrika. Siqeqesha abeluleki ukuthi baqale izinhlelo zabo zokweluleka. Sikholelwa ekufundeni kontanga, ukufunda ucwaningo ngokwenza, ukunakekela umcwaningi wonke, nokufunda impilo yonke. Sikhule umphakathi onogqozi wabacwaningi emakilabhini ethu ezincwadi zocwaningo futhi sisebenza nabafundisi bamanyuvesi ukuthuthukisa ukuqeqeshwa kocwaningo okubandakanya wonke umuntu. Iwebhusayithi yethu: https://eiderafricaltd.org/
Isikhungo Sokuqeqesha Kwezokuxhumana
I-TCC Africa iyisikhungo sokuqala sokuqeqesha esizinze e-Afrika ukufundisa amakhono okuxhumana asebenzayo kososayensi. I-TCC Africa iyiTrust enqoba imiklomelo, esungulwe njengenhlangano engenzi nzuzo ngonyaka we-2006 futhi ibhaliswe eKenya. I-TCC Africa inikeza ukwesekwa kwamandla ekuthuthukiseni ukukhishwa kwabacwaningi nokubonakala ngokuqeqeshwa kwezokuxhumana kwezazi nezesayensi. Thola okuningi nge-TCC Africa ku https://www.tcc-africa.org/about
Lesi simemezelo sashicilelwa ekuqaleni e https://www.tcc-africa.org/900-early-career-researchers-from-sub-sahara-to-be-mentored-in-their-research-lifecycle/
Ukusebenzisana kwangaphambilini ne-TCC Africa ne-Eider Africa
I-AfricArXiv, Eider Africa, I-TCC Africa, Futhi Ukubuka kabusha bahlanganisa amabutho ukuhlanganisa ososayensi abavela kulo lonke elase-Afrika kanye nososayensi ababambe iqhaza ocwaningweni oluhlobene ne-Afrika ochungechungeni lwezingxoxo ezi-3 ezibonakalayo kanye nokubuyekezwa kontanga ngokubambisana.
I-TCC Africa ngokubambisana ne-AfricArXiv ithumele isiphakamiso ngokuhlanganyela ku Ukwakha amandla okubuyekezwa kontanga nokubekwa phambili e-Afrika.
Ukunqoba kwe-TCC Africa ne-AfricArXiv e-ASAPbio Sprint
Categories:	Ukwakhiwa kwamakhonoUkubambisana
Tags: Eider AfricaUcwaningoI-TCC Africa
Izigaba Khetha Category Izimemezelo (13) Ukwakhiwa kwamandla (7) Ukubambisana (29) I-COVID-19 (31) Umcimbi (7) Okuvamile (9) Izingxenyekazi zekhompuyutha (1) Ulwazi Lomdabu (3) Inhlolokhono (8) Ukwehluka kolimi (10) Ukufinyelela Okuvulekile (37) Isayensi evulekile (16) Ukubambisana isimemezelo (2) Ukubuyekezwa Kontanga (8) I-Podcast (1) Ukuphrinta (11) Ukushicilela (15) Bika (1) Ukuxhumana Kwesayensi (17) Ukuhanjiswa (3)
I-AfricanResearch Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela ASAPbio I-BlackLivesMatter IBlackVoicesMatter Isikhungo se-Open Science i-chatbot Covid-19 Isayensi ye-Decolonise I-dialogShift Izikhundla Zedijithali Ukutholakala Ukutholakala kocwaningo lwase-Afrika Eider Africa Fundraising UJoy Owango ukwahluka kwezilimi Masakhane Ukucutshungulwa kolimi ngokwemvelo I-Omdurman Islamic University kuvula ukufinyelela okuvulekile I-OpenCollective Vula Ulwazi Lamamephu vula isayensi Uhlaka lweSayensi evulekile I-OSF Bhekisiswa ontanga isimangalo Ukubuka kabusha ukushicilela I-PubPub ukubuyekeza okusheshayo Ukulungiswa kabusha Ucwaningo Ukuxhumana Ngezazi Ezokuxhumana Kwesayensi IsayensiOpen I-SDG2 Sudan Izinhloso Zokuthuthukiswa Eziqhubekayo I-TCC Africa Humusha Isayensi ukuhumusha Ukubonakala